Home Wararka Sanad-guuradii 10naad ka soo wareegatay imaantinka Turkiga Soomaaliya oo la xusi doono
Sanad-guuradii 10naad ka soo wareegatay imaantinka Turkiga Soomaaliya oo la xusi doono
Waxa ka socda magalaada Muqdisho qaban-qaabada xuska Sanad-guuradii 10naad ee ka soo wareegatay imaantinka Turkiga Soomaaliya. Waxaa maanta la filayaa in magaalada Muqdisho uu soo gaaro wafdi ka socda dowladda Turkiga, kuwaasi oo ka qeyb geli doono 10 sano guuradii ka soo wareegatay markii Turkiga uu gargaarka u fidiyay shacabka Soomaaliyeed.
Wafdigaan uu hoggaamin doono, R/Wasaaraha dalka Turkiga iyo Wasiirka Arimaha Dibada Dalkaasi Meflaat Kafashoqlu,waxaana qeyb ka ah wafdiga xubno Saraakiil ciidan ah iyo Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda Turkiga. Marka ay Muqdisho soo gaaraan ayey kormeeri doonaan Saldhiga TURKISOM Ee Tababarka Ciidamada Soomaaliyeed lagu siiyo iyo safaarada ay ku leeyihiin Degmada Cabdi Casiis ee Muqdisho.
Tan iyo 2011-kii oo haatan laga joogo 10 sano Turkiga ayaa taageero siiyay Soomaaliya,waxaana Turkigu ay maamulaan xarumaha dhaqaalaha ugu badan Dawlada Kasoo gala sida Garoonka Diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan iyo Dekada weyn Ee Muqdisho.